Taliyaha Booliska oo xil u magacaabay Nin ay qaraabo yihiin | Keydmedia
Taliyaha Booliska oo xil u magacaabay Nin ay qaraabo yihiin
Ilaa hadda lama yaqaan sababta rasmiga ah ee xil ka qaadista loogu sameeyo General Bariise.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyihii Laanta ilaalinta cabshuuraha Bariga Soomaaliyeed General Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa xilkii laga qaaday kadib wareegto ka soo baxday xafiiska taliyaha booliska General Cabdi Xasan Xijaar.
Wareegtada ayaa sidoo kale lagu magacaabay taliyaha cusub ee laanta ilaalada canshuuraha Bariga, waxaa xilkaan loo magacaabay Cabdirisaaq Afgaduud oo horey u ahaa taliyihii ciidanka booliska maamul goboleedka Puntland.
Ilaa hadda lama sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambeyso xil ka qaadista lagu sameeyay General Cabdullaahi Xasan Bariise oo ka tirsanaa saraakiisha sar sare ee ciidanka Booliska Soomaaliyeed, islamarkaana muddada dheer soo shaqeynayay.
Wararka ayaa sheegaya in taliyaha cusub ee loo magacaabay laanta ilaalinta Canshuuraha ee Afgaduud ay aad isugu dhaw yihiin General Xijaar, isla markaana iskala soo jeedaan deegaanada maamulka Puntland.
Taliye Xijaar ayaa maalmihii la soo dhaafay xil ka qaadis iyo magacaabis weday, taasoo ku sameysanayo hoggaanka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxaana xusid mudan in dhawaan taliye Xijaar uu xilkii ka qaaday agaasimihii Isbitaalka Madiino Dr Maxamed Yuusuf oo muddo 13 sano ah ka shaqeynayay Isbitaalka.
Warar 29 September 2020 8:09
Warar 28 September 2020 20:33
‘Qoor qoor’ oo lagu soo dhaweeyay Gaalkacyo
Warar 28 September 2020 17:43
Ayax ku habsaday deegaanno ka tirsan Puntland
Warar 28 September 2020 17:09